Nhanho Dzakagadzirwa Kuti Botnets Kunzwisisa - Semalt Expert
Botnet inomirira robot mitambo. Inogona kurondedzerwa senhare yekombiyuta yakave yakakonzerwa nehutachiona inozivikanwa seMarware kana iri pasi pekutungamirirwa kwebhokisi. Makombiyuta ose ari kutungamirirwa nehombodo anotumidzwa se bot. Uyu anorwisa anokwanisa kutumira mirairo kumabhodeni emakombiyuta kuti aite zviito zvinokuvadza.
Michael Brown, the Semalt Mutengi Achibudirira Mutevedzeri, anotsanangura kuti munhu anorwisa anogona kuita zvido zvemhosva zvichienderana nezviyero kana kuti zvidzidzo zvebhuku zvakarwisa kombiyuta - hosting usa cheap. Mabhoti anokwanisa kuita mabasa anowedzera kutyisa asingakwanisi kuwanikwa nemarware. Apo mabhota anopinda mumakombiyuta, vanogona kuramba vari muhurongwa uye vanochengetedzwa nevanokurwisa kure. Nzira iyo hutachiwana makombiyuta inogona kuwana zvinyorwa zvinoita kuti vachinje maitiro avo nekukurumidza.
Zvimwe zvezviito zvinoshandiswa nehutsotsi zvinosanganisira:
Vakawanda vanhu vanowanzorega kuteerera nyaya iyi sezvo vanonzwa sokuti email yakatova nyaya yekare yekurwisa. Zvisinei, spam botnets yakawanda zvikuru uye inogona kurwisa kupi zvako. Zvinonyanya kushandiswa kutumira spam kana mharidzo dzemashoko dzinosanganisira malware inouya muzviwandu zvakawanda kubva kune botnet yose..Semuenzaniso, botnet yeDauwail inokwanisa kutumira 74 mabhiriyoni emashoko pazuva. Izvi zvinobvumira bhoti kuparadzira nekudaro kuchinja makombiyuta akawanda uye zuva rimwe nerimwe.
Inopa simba rakawanda rebhokisi rinobatsira kuti riwedzere ruzivo rwakavakirwa nehutano hwezvikumbiro kuitira kuti zvive nyore kuvashandisi varo. Munhu achada kubhadharira kuti awane kombiyuta, uye izvi zvinowanzoitika kumasangano kana nekuda kwemunhu oga kana zvematongerwe ezvematongerwe enyika saka achivaramba kuti vawane mamwe mashoko anokosha, uye ivo vachaguma vachibhadhara kuti vadzivise kurwisa.
Tsvina idzi dzakagadzirirwa kubira mari kubva kumakadhi emakwereti nemabhizimisi. Izvi zvinowanikwa kuburikidza nekubira ruzivo rwakavanzika rwekadhi rechikwereti. Izvi zvinosanganisira ZeuS botnet iyo yakashandiswa kubatsira pakuba mamiriyoni emari kubva kumakambani akawanda.
Tsvina idzi idzi shoma uye dzakagadzirirwa kubatsira varwisi kupinda mumasangano uye kuwana ruzivo rwakavanzika kubva kwavari. Aya maitiro ane ngozi kumasangano sezvaanoshandisa zvakanyanya zvakavanzika uye zvakakosha dheta, kusanganisira kutsvakurudza, ruzivo rwezvemari, ruzivo rwemunhu wese uye ruzivo rwepfungwa.
Vaya vanopikisa vanoitwa apo muchengeti anotungamirira mabhodhi ekudzivirira maseraji nekushandiswa kwemaimeri, kugovera mafaira, nemimwe mitemo yekushandiswa kwevashandisirwo vevanhu kana kushandisa mamwe mabhidhi kuita sepakati. Apo iyo kombiyuta yevashanduri inotanga faira yakaipa, mabhoti anotumira zvinyorwa kune murairo unobvumira mubatsiri kuti atore uye aite mirairo kumakombiyuta akabatwa.
Botnets yakave yakanyanya kutyisidzira sezvo iine nyanzvi yakaenzaniswa nedzimwe mavharusi emakombiyuta, uye izvi zvakakanganisa hurumende, makambani, uye munhu mumwe nomumwe. Botnets inogona kudzora mitambo uye kuwana simba, uye inogona kutungamirira mukurasikirwa kukuru apo ivo vanoita sevanokuvadza mukati mekodzero vanogona kuita zviito zvisina kunaka saka kuparadza sangano.